12 calamaadood oo lagu yaqaano dadka kartida leh - iftineducation.com
aadan21 / October 18, 2016
iftineducation.com – Dadka kartida leh ayaa lagu karto calaamado gaar ah oo ay kaga duwan yihiin dadka aan
kartiga lahayd. 13 kaan calaamood oo aan hoos ku xusayo haddii aad leedahay hambalyo waxaad ka midtahay dadka kartida leh.
1. Waqtigooda kuma lumiyaan calaacal: Dadka kartida leh ma ahan kuwo meelaha calaacal la taagan oo ka eed sheegta dadka kale iyo waxyaabaha ilaahay u qoray balse waa kuwo naftooda masuul ka noqda oo dareensan in noloshu aysan ahayn mid 100% ah. Sidoo kale waqtigooda kuma dhumayaan waxyaabaha aysan kontrooli karin.
2. Xaqooda kama tanaasulaan: Qofka kartida leh dadka kale uma ogolaado in ay maamulaan oo xaqiisa ku tuntaan. Ma isticmaalaan erayada sida “Qofkaas ayaa waxaas igu qasbay” iwm. Waxay si xoogan u xakameeyaan dareenkooda waxayna aaminsanyihiin awoodooda.
3. Kama xishoodaan isbedalka: Dadka kartida leh kama wahsadaan in ay noloshooda isbedal ku sameeyaan haddii loo baahdo. Kama cabsaan in ay iska daayaan dabeecadaha xumaanta leh oo ay raacaan wixii wanaagsan.
4. Kama walwalaan qancinta dadka oo dhan: Dadka kartida leh waxay dareensanyihiin in aysan macquul ahayn in dadka oo dhan la qanciyo. Kama xishoodaan in haddii loo baahdo ay ka soo horjeesaan firkada dadka maqaamka leh isla markaana ay ka hadlaan xaqa iyo cadaalada.
5. Kama leexdaan hawlaha culus: Dadka kartida leh waa kuwo fahansan culeyska ay leeyihiin shaqooyinka culus balse waa kuwo aan cassi darteed u dhaafin hawl wax ka qabasho u baahan. Waxay sameeyaan qiimeyn ku saabsan hawsha taala waxayna ku dhaqaaqaan wax qabad iyaga oo fahansan qasaarada iyo faa’iida.
6. Mustaqbalka ayaa u muuqda: Dadka qaar ayaa lagu yaqaan in ay ka hadlaan waayo waayo iyo sidii xaaladu ahaan jirtay balse dadka kartida leh kuma mashquulaan waqtigii hore maadaama wixii dhacay ay dheceen oo aysan soo laabanayn balse waxay xooga saaraan mustaqbalka iyo sidii ay uga guuleysan lahaayeen.
7. Khaladaadka kuma celceliyaan: Dadka kartida leh markii qalad ka dhaco waxay isku dayaan in ay wax ka faa’idaan sababaha keenay qaladka iyo sidii ay xalka ugu heli lahaayeen balse ma ahan kuwo isla khaladka ku celceliya. Waxay qaataan masuuliyada qaladaadka ka dhacay.
8. Kama xumaadaan horumarka dadka kale: Waxay ku farxaan horumarka iyo guulaha dadka kale iyagoo isku daya in ay la midnoqdaan dadkaas. Kama xumaadaan oo ma xaasidaan dadka horumarka gaaray. Waxay aqoonsanyihiin in horumarka lagu gaaro hawlkarnimo isla markaana laga doonayo dadaal dheeri.
9. Kuma niyad jabaan fashilka: Qofka kartida leh kama niyad jabo qorshayaashiisa markii uu fashil ku yimaado ee waxa uu isku dayaa in uu kor u qaado hawshiisa oo uu la yimaado fikrado kale oo uu ku gaari karo hadafkiisa. Ma joojiyo isku da’yga ilaa uu ka gaaro guul.
10. Ma dhibasadaan kali ahaanta: Dadka kartida leh ka dhibsadaan marka ay kaligood yihiin balse waxay u isticmaalaan waqtigaas in ay si deggan u fikiraan oo ay la yimaadaan fikrado cusub iyo qorshayaal muhiim ah.
11. Waxay dareensan yihiin maqaamkooda: Dadka kartida leh waxay ogyihiin maqaamka bani’aadamku ku leeyihiin dunida. Waxay ogyihiin in aysan jirin waxay ilaalay ama dadka kale ku sheegtaan in aysan jirin. Balse waxay raadiyaan fursado ay kaga faa’idaysaan nicmooyinka ilaahay iyo wanaaga dadka kale.
12. Ma filaan natiijo degdeg ah: Hawlkasta oo ay qabanayaan dadka kartida waxay ogyihiin in waxkasta ay qaataan waqti oo ma filaan in waxkasta daqiiqado ku dhamaadaan oo horumar lagu gaaro maalin.
Layaab Gabar Isku Jebisay Guska Gacan Ku Sameyska Ah ee caaga ka sameysan kkkkkk
Qaabka Saaxiibtaa Biyaha looga Keeno inta aadan Biya Bixin galmada fareeska